Xisbiga Dimoqraadiga Maraykanka ayaa ku dhaleeceeyay William Barr Dhamaanba sii daynta war bixintii baadhitaanka Mueller ee mudada dheer lasugayay | Dhamays Media Group
Dimoqraadiyada Maraykanka ayaa ku dhaleeceeyay Xeerilaaliyaha Guud William Barr inuu ka warqabo warbixintii dheer ee la sugayay ee Mueller, iyadoo xisbiga Jamhuuriga iyo Madaxweynaha Donald Trump uu u dabaaldegay Barr.
Khamiistii, Barr ayaa sii daayay version la yiraahdo la taliye khaas ah Robert Mueller warbixinta dheer ee sugaysay doorka Russia ee doorashadii madaxweynenimada ee 2016-ka.
Warbixinta, oo ka badan 440 bog oo dheer, waxay leedahay waxyaalo kala duwan oo lacag la’aan ah, oo ay ku jiraan macluumaadka lagu sifeeyey, macluumaadka la xiriira tijaabooyinka iminka socda iyo macluumaadka garsoorka, oo ay ku jiraan wareysiyada markhaatiga iyo diiwaanada kale.
Sida laga soo xigtay warbixinta, Mueller ma uusan dhicin in haddii Madaxweyne Trump uu geystay cadaadis cadaalad ah, laakiin sidoo kale isaga ma dhicin.
Barr ayaa markii dambe ku soo gabagabeeyay in Trump uusan jabin sharciga, laakiin wuxuu u sheegay shir jaraa’id in Mueller uu faahfaahinayay “10-jeer oo uu ku lug lahaa madaxweynaha iyo ka sheekaynaya aragtiyaha sharci ee suurtagalka ah in la isku xiro ficiladan asaasiga ah dambiga xayiraadda”.
Mueller wuxuu qoray “Inkasta oo baaritaanka lagu ogaaday in xiriiro badan oo u dhexeeya shakhsiyaadka xiriirka la leh dawladda Ruushka iyo shakhsiyaadka lala xiriirinayo ololaha Trump, caddayntu ma ahan mid ku filan si ay u taageeraan dambiyada ciqaabta. “
dadka siyaasada rog roga ee xisbiga dimuqraadiyiinta
ayaa dalbanaya in la sii daayo warbixinta oon la xakamayn,
iyagoo mr Barr na ku cambaareeyay warbixintiisa.
Afhayeen u hadlay Aqalka Senate-ka Nancy Pelosi ayaa ku qoray boggiisa Twitter,, “Dalkayagu waxa uu dalbanayaa oo u qalmaa sharrax buuxa, isaga oo intaa ku daray waa sababta aan si toos ah uga maqalnay Mueller.”
Jerrold Nadler, guddoomiyaha Guddiga Garsoorku , wuxuu codsaday in Mueller uu ka markhaati furo guddida “ugu dambeyntii May 23”.
Guddoomiyaha Guddiga Sirdoonka Aqalka Sare, Adam Schiff, ayaa sheegay in Mueller lagu martiqaaday in uu marqaati ka yahay guddiga hortiisa. “Ka dib baadhitaan laba sano ah, dadwaynuhu waxay u qalmaan xaqiiqda,
maaha in loo doorto Qareenka Guud ee Barr,” ayuu yidhi.
Kamala Harris, oo ah Senator Maraykan ah ayaa leh kalsooni buuxda nagasii inu yahay madax wayne loo doortay si madax banaan, oo kuna boorriyay Barr
in uu soo hor dhigo soona bandhigo Congress-ka si buuxda oo aan loo soo koobin warbixinta Muller “dhammaanba baadhitaannada hoose ee baadhista”.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Trump ayaa sheegtay in natiijada baaritaanku ay “guusha guud ee madaxweynaha” ka dhigtay.
“Warbixinta ayaa hoosta ka xariiqday waxa aan ku doodnay bilawgii – ma jirin wax is khilaaf ah – ma jirin ,” wax is khilaaf ahayuu yiri koox sharci yaqaanka ah.
Mitch McConnell, oo ah hoggaamiye Jamhuuriga, ayaa sheegay in Maraykanku uu “nasiib u yeeshay hoggaamiye khibrad leh sida Bill Barr” wuxuuna sheegay in qareenka guud uu ku dhaqmey “sida ugu sarraysa daahfurnaanta”.
Guddoomiyaha garsoorka Jamhuuriga Jamhuuriga Lindsey Graham, isaga oo xusay in guddiga dib-u-eegista warbixinta uu socdo, waxa uu ammaanay Barr “isaga oo ku ballanqaaday sida uu uga go’an yahay hufnaanta iyo ilaalinta dadka Maraykanka”.
ka hor inta aan la sii deynin warbixinta Khamiistii, Barr wuxuu difaacay Trump.
Barr, oo ah sarkaal sare oo fulinaya sharciga Mareykanka iyo Trump oo magaciisa ku qoray, ayaa shir jaraa’id u qabtay Waaxda Caddaaladda isaga oo raadinayay in uu qaabeeyo sheeko ku saabsan maalinlaha kulul ee Trump ee madax-bannaanida ba’an.
Markii uu soo galay xafiiskii oo uu doortay inuu guto waajibaadkiisa madaxweyne, wakiillada federaalka iyo xeer-ilaaliyeyaashu waxay xakameynayaan dhaqankooda ka hor iyo ka dib xafiiskii iyo dhaq-dhaqaaqyada qaar ka mid ah saaxiibadiisa, “ayuu yiri.
“Isla markaa, waxaa jiray warar isdaba-joog ah oo ku saabsan warbaahinta saxaafada oo ku saabsana culeyska shakhsi ahaaneed ee madaxwaynaha, sidoo kale, sida laga soo xigtay bilowgii, dhab ahaantii ma jirin wax is khilaaf ah,” ayuu raaciyay Barr, mid ka mida dadka caanka ah ee arkay warbixinta.
Barr ayaa sidoo kale sheegay in wargeyska Mueller uu soo bandhigay tiro yar oo jajab ah si loo helo koox yar oo siyaasiyiin ah.
Warqad loo diray Congress ka dib Khamiistii, Barr ayaa sheegay in qaybta labaad ee warbixinta la siin doono “Gang of Sight”, oo ah siyaalaha ugu sarreeya ee Golaha iyo Siyaasadda ee ka socda labada dhinac oo u eegi kara macluumaadka xasaasiga ah ee xasaasiga ah. Guddiga garsoorka iyo xubnaha garsoorka Senate-ka ayaa iyaguna heli doona kuraasta iyo darajada xubnaha.
Barr ayaa sheegay in dhammaan dheddig-laboodka laga saari doono qaybtaas warbixinta marka laga reebo kuwa la xiriira macluumaadka garsoorka.
Qareenka Guud wuxuu yiri, “Ma aaminsani in aan leeyahay fikradda ah in aan u sheego macluumaadka garsoorka ee Congress-ka, hase yeeshee, hoygaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dib u eegto badinta qalabka la jabiyay.
Trump ayaa Twitter-kiisa ku soo daabacay
No collusion – no obstruction. For the haters and the radical left Democrats – GAME OVER.
Previous: LAMAANE GURI KADHISTAY BAD WAYNTA LAGUNA SOO EEDEYAY INAY KHAL KHAL GALYEEN AMAANKA WADANKA Thailand TAASOO LARAADINAYO HADA
Next: “Dawladdii Ka Horraysey Dawladdani Cid Qabata Ayay Lahayd, Ee Tan Yaa Looga Ashkatoodaa..” ? Sh. Aadan-Siira